के तपाई आफ्नो कोठा का लागी तन्ना (बेडसिट) छान्नु हुदैछ, यी कुरा ध्यान मा राखनुहोला है!! -
के तपाई आफ्नो कोठा का लागी तन्ना (बेडसिट) छान्नु हुदैछ, यी कुरा ध्यान मा राखनुहोला है!!
फोटो फिचर विचार/ब्लग
२०७५, १६ माघ बुधबार ०५:४४ March 28, 2020 clickonLeaveaComment on के तपाई आफ्नो कोठा का लागी तन्ना (बेडसिट) छान्नु हुदैछ, यी कुरा ध्यान मा राखनुहोला है!!
घर मा बस्दा अधिकांश मानिष हरुको को बढी भन्दा बढी समय सुत्ने कोठा मा नै बित्ने गर्दछ। ऐस्तो मा सुत्ने कोठा सफा सुघ्घर र चिटिक्क परेको हुनु ले तपाई को मन लाई सुकुन दिदछ। सुत्ने कोठा को सजावट मा मात्र पर्दा, टेबल, फोटो, पोस्टर र फूलदानी हरु मात्र अाउदैनन, बिस्तरा माथी लगाईेको तन्ना ले पनी धेरै ठुलो भुमिका खेलो हुन्छ। ऐस्तो मा यो आबश्यक हुने गर्दछ कि तपाई मौसम र भित्ता को रंग लाई बिचार गरी सही र मिल्ने खाल को तन्ना नै छान्ने गर्नुहोस।
आउनुहोस, जानकारी लीउ सुत्ने कोठा का लागी तन्ना हरु छान्दा तपाई ले कुन कुन कुरा हरु लाई ध्यान दिनु पर्दछ;
तन्ना छानदा मौसम र आफ्नो आबस्यक्ता लाई ध्यान मा राख्नु होला। जुन् अरुको कोठा या घर मा राम्रो देखिन्छ त्यो साय्द तपाई को मा राम्रो नहुन सक्छ। त्यस कारण आफ्नो स्थिती लाई ध्यान मा राखेर छान्ने गर्नुहोस।
तन्ना किन्दा मौशम को ठुलो भुमिका हुन्छ, यदी गर्मि मौसम मा तन्ना किन्दै हुनुहुन्छ भने कटन को किन्नुहोस र यदी जाडो महिना मा जिन्दै हुनुहुन्छ भने तातो हुने कपडा जस्तै सिल्क, सेटिन जस्तो हरु को तन्ना किन्नुहोस।
यदी तपाई सधै र दिन दिनै प्रयोग हुने तन्ना चाहनु हुन्छ भने यो कुरा दिमाग मा राखु होला त्यो तन्ना मुजा पर्ने नहोस किन भने दिन दिनै को प्रयोग गर्न का लागी त्यस्तो खाल को तन्ना राम्रो मानिन्छ र धुन पनी सजिलो हुन्छ।
यदी आफ्नो सुत्ने कोठा को लागी कटन को तना किन्ने सोचदै हुनुहुन्छ भने त्यसको आकार मा पनी ध्यान दिनु होला किन भने धेरै जसो कटन को तन्ना हरु धुई सके पछी खुम्चिने हुन्छन।
तन्ना जहिले पनी त्येस्तो आकार को किन्नु होला जसलाई बिस्तरा मा लगाउदा सजिलै सङ च्यापन सकियोस।
कहिले काही र कुनै महत्वोपुर्ण समय का लागी लागी सिल्क को तन्ना धेरै नै रम्रो देखिन्छ र यस्ले कोठा को शोभा पनी बढाउदछ।
तपाई लाई माईग्रेन को समस्या छ भने अपनाउनुहोस यी उपाय हरु, आराम मिल्नेछ।
गाईघाट उदयपुरका जनताहरुका लागी खुशिको खबर, पढनुहोस के रहेछ?
‘निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही गरिए ओली सरकार ढल्ने सम्भावना देखेको छु, त्यसैले बलात्कारी र हत्यारा सरकारकै संरक्षणमा छ’ : बिजुक्छे
२०७५, ७ कार्तिक बुधबार ०४:०४ October 24, 2018 clickon
२०७५, २७ असार बुधबार १२:२२ July 11, 2018 clickon
शनिवार शनि देव बाट विशेष लाभका लागि गरौ यो उपाय
२०७६, २ कार्तिक शनिबार ०३:०८ October 19, 2019 clickon
सरिता गिरी प्रकरणमा आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीको टिप्पणी ‘खेदजनक’